Islihi-Nairobi | News From Somalia
Category Archives: Islihi-Nairobi
KISMAAYO IYO KENYA:-Kenya oo dalbaneysa ciidamo dheeraad ah oo ka gacansiiya gumaysigeeda Soomaaliya.
Dowladda Kenya ayaa wada ola ole ballaaran oo ku aadan sidii Soomaaliya loo keeni lahaa ciidamo shisheeye oo dheeraad ah kuwaasi oo Kenya ku gacansiiya gumaysiga ciidamadeedu ka wadaan koonfurta fog ee Soomaaliya.
Ku xigeenka madaxweynaha wadanka Kenya ninka lagu magacaabo William Ruto ayaa socdaallo kala duwan ku kala bixinaya dhowr dal oo ku yaa qaaradda Afrika kuwaasi oo uu ka shaxaadayo islamarkaana ka dhaadhicinayo sidii Soomaaliya gaar ahaanJubbooyinka loo keeni lahaa ciidamo Afrikaan ah oo wata magaca Amisom.
Dalalka Nigeria iy Ghana ayuu William Ruto kala hadlay sidii ay ciidamo ugu soo diri lahaayeen Soomaaliya kuwaas oo qeyb ka noqon doona ciidanka shisheeye ee Amisom.
Sida ay sheegayaan warar hoose Kenya dan kama laha Muqdisho iyo masiirka ciidanka shisheeye guud ahaan laakiin waxaa la soo sheegayaa inay ciidanka ay dalbaneyso u rabto iay yimaadaan Jubbooyinka oo ay Kenya aaminsantahay inay iska leedahay.
Waxaana wararku intaasi ku darayaan in Kenya ay isku dayayso sidii haddii ciidankaasi helo ay iyadu u maamuli lahayd iyadoo iskala weyn inay hoos tagto Taliska Amisom ee Ugandeseku ay xilligan hor boodayaan.
Inkastoo ay si xoog ah kamaga mid noqotay Amisom, hadana Kenya way iskala hanweynatahy ciidanka Shisheeye waxaana ay si cad u sheegtay inay ka go`antahay inay sii heysato Jubbooyinka.
Waxaa meeshaas ka soo baxay wax badan oo ka digeen hogaanka Shabaabka,waxaana maanta xaalku marayaa in Somali qabiil ahaan ugu kala qabsanto iayada oo dhulkoodii gaalo kale loo doontay!.
Maleeshiyo Beeleedka Dagaal-ooge Axmed Madoobe “Raaskabooni”oo Dad ku Xasuuqay Kismaayo.
Dhimashada iyo dhaawaca dad shacab ah ayaa ka danbeysay kadib markii maleeshiyaadka Dagaal-ooge Axmed madoobe ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ku sugnaa suuqa xoolaha ee magaaalada Kismaayo.
Goob joogayaal ku sugan magaalada Kismaayo ayaa sheegay in maleeshiyaadka hubeysan ay dhaceen lacago shilin Soomaali ah,dilalka ayaa sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada kusoo badanayay rasaas aan la ogeyn cidda lagu ridayo ayaa saacad walba laga maqlaa magaalada arrinkaasi oo shacabka cabsi ku beertay.
Magaaladda ayaa tan iyo markii ay qabsadeen Ciidanka dowladda Kenya iyo maleeshiyo beeleedka dagaal-ooge Axmed maddobe “Raaskabooniyiinta” waxaa soo badanayay laynta dadka shacabka Muslimiinta ah taasi oo sabab u tahay maleeshiyaadka hubeysan ee yaacaya xaafadaha magaalada ka Kooban tahay iyadoona wali magaaladu ka taagantahay xiisadihii ku aadanaa maamul u sameynta maamulka lamagac baxay Jubbaland iyo kuwo kale oo ka tira badan oo mid walba madaxweyne la socdo waxay ugu yeereen!.
IGAD IYO ARDIGA SOMALIYEED:-General Gabre iyo Saraakiil Igad ah oo Muqdisho soo gaaray iyaga oo cadaadis ku saaraya Xasan Guguurte inow Igad u daayo arimaha Kismaayo.
Wafdi ka socday Ururka IGAD ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxayna kulamo laqaateen R/wasaare Saacid iyo saraakiisha ciidanka AMISOM.
Ilo wareedyo laga helay xafiiska Saacid ayaa sheegaya in IGAD ay DF-ka ku cadaadisay in ay faraha kala baxdo arrimaha Kismaayo oo IGAD ay u wakiilatay Dowladda Kenya oo ciidankeedu heystaan Kismaayo iyo degmooyin Jubbada Hoose katirsan.
General Gabre taliyihii ciidanka gumeysiga Itoobiya ee sanaddii 2007 qabsaday Soomaaliya oo wafdiga IGAD kamid ahaa ayaa kasoo muuqday kulankii Saacid lala yeeshay.
BADDA SOMALIA:- Dhulbadeedka Soomaaliya waa 200 NM ee ma aha 12 nm. Qore:-Prof. Cabdi Faarax Xasan, Guddoomiyihii Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed
Posted on May 16, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Prof. Cabdi Faarax Xasan oo dhambaal u diray Xildhibaanadda baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kana codsaday in aay arrinta lal xiriirta badda Soomaaliya mariyaan marinkii aay mariyeen barlamaankii hore…
Maxaa dhaxalkaas loo seejinayaa jiilka soo koraya ee Soomaaliyeed?
Ku: Dhammaan xubnaha Barlamaanka Federaalka Soomaliyeed.
Ku: Shacbiga Somaliyeed
Og: Madaxweynaha JFS
Og :Ra’iisulwasaraha Xukumadda Soomaliyeed
Waxaa ayaamahan dib u soo noqday ka hadalka dhul badeedka Soomaaliya.
Arrintaasi waa soo rogaalcelin arrintii 2009kii walwal iyo caro baahsan ka dhex abuurtay dadweynaha soomaaliyeed meel aay joogaanba, ugu dambayntiina barlamaankii Soomaaliyeed ee markaa jirey u qaraar sharci ah oo lagu qancay ka gaaray, kaas oo ah in:- Qarammada Midoobey: aay Heshiiskii Isfahamka Badda WAXBA KAMA JIRAAN KA DHIGEEN.
Waxaa xigay in Golihii Wasiirrada ee Dowladdii GAAS aay si wada jir ah uga saareen ROADMAPKA (Qorshihii la rabay in Badda Soomaaliya lagu soo koobo 12 nm) .( fiiri hoos)
SomaliTalk.com » DFKMG oo Arrimaha Badda sida EEZ ka Saartay …
Nasiib darro, Sida aay muujinayso qudbadda halkan ku lifaaqan http://swatsecuritysystems.com/info/3961/SPEECH-BY-THE-PRESIDENT-OF-SOMALIA-TO-THE-CONTACT-GROUP-FOR-PIRACY-OFF-THE-COAST-OF-SOMALIA-%E2%80%93-1st-MAY-2013-NEW-YORK) ee ka soo baxay Madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu Madaxweyne Xasan Shiikh Mohamud dib u furay arrintii dhulbadeedka Soomaaliya oo aannu wada ognahay iskudayaga joogtada ah ee boobka dhulbadeedka Soomaaliyeed uu soo maray.
Madaxweyne Xasan asagoo aan wali Dowlad Goboleedyadii faraha ku heynin oo in ka badan 600,000 oo somali ahi aay ku silicsanyihiin xeryo qaxooti, islamar ahaantaasna aay dhallinyaradii Soomaaliyeed aay badaha ku go-ayaan, dalkiina aay ku dhex suganyihiin Ciidamo ajnabi ah iyo ARGAGIXISO, ayuu kaligiis rabaa in Qorshaha GURRACAN oo muddada dheer soo meel mari waayey in deg deg iyo si sibiqsibiq ah uu u fuliyo.
Waxaa madaxweynuhu u ekaysiinaya arrinta u soo cusboonaysiiyey ee soo koobidda badda, go-aan horay loo gaarey, taas oo aan waxba ka jirin.
Waa nasiib darro ku habsatay QARANKA SOOMAALIYEED in markii KMG laga baxay la isku dayo in la fuliyo KHAYAANADAN muddada dheer la damacsanaa.
UMMADDA SOOMAALIYEED bal dib ha eegaan inta marxaladood oo aay soo martay Khayaanadaan la rabo in DHULBADEEDKA SOOMAALIYEED laga dhigo 12 nm ,ayadoo la isku dayayay mar kasta in meesha laga saaro Sharciga LAW No. 37. Law No. 37 on the Territorial Sea and Ports, of 10 September 1972
Ma waxaa jira saaxiibtinimo iyo dhaqaale naloo raadinayo oo u dhigmi kara baaxadda dhulbadeedka iyo kheyraadka ku jira ee nala dhaafsiinayo ? jawaabtu waa maya.
Ammuu KUMEELGAARKII inoo roonaa?????????
Madaxweynwe Xassan wuxuu tillabadan si bareer iyo sharci darro ah ugu rabaa in uu u baabi’iyo sharcigii badda somaliyeed. (http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/SOM_1972_Law.pdf – Law N.37) oo ka diwaan gashan UN.
Ma aha wax jira mana jirto meel u ka diwaan gashan yahay sharciga law 1988 ee madaxweyne Xasan ku salaynayaa khudbadiisa asagoo oranaya ( I am happy to announce that we have an existing 1988 Law that puts us fully in compliancewith the UNCLOS Treaty we signed in 1982 and was ratified by the former SomaliGovernment in February 1989) –Sharcigaan uu sheegay taariikh kaliya ayuu inoo sheegay ee lambar ma lahan sida – Law No. 37 on the Territorial Sea and Ports, of 10 September 1972 oo ka diinwaangashan Qaramada Midoobay (National legislation – DOALOS/OLA – United Nations ).
Taas waxaa kasii daran in annagoo KMG ka baxnay oo Dowlad rasmi ah noqonnay, in wali aay na daba socoto khayaanadii KAMPALA ACCORD, Madaxweyne Xassan waxuu yiri :- (We have now done this again through the Kampala Process). (Aqri qudbaddiis )-http://swatsecuritysystems.com/info/3961/SPEECH-BY-THE-PRESIDENT-OF-SOMALIA-TO-THE-CONTACT-GROUP-FOR-PIRACY-OFF-THE-COAST-OF-SOMALIA-%E2%80%93-1st-MAY-2013-NEW-YORK
Waxaa muuqata in Madaxweyne Xassan u danta Soomaaiyeed ka doorbiday oo uu u janjeersaday midda dowlado iyo shirkado shisheeye oo si NAXARIIS DARRO AH ugu hawlan in aay boobaan dalka Soomaaliya ayagoo ismoogeysiinaya sharciyadii qaranka Soomaaliyeed ama sharciyadii caalamiga ahaa sida LAW no. 37.
Tillabadan Madaxweyne Xassan uu qaaday waxay si cad u muujinaysaa in uu ku hawlan yahay hawshii somali oo idil iyo barlamaankeedu-ba horay uga diideen Abdirahman Abdishakuur iyo dowladdii u ka midka ahaa.
Ka bixitaankii ku meel gaarnimada mirihiisii ugu horreyey waxaay noqdeen in loo adeegsado u hibeynta dhulbadeedkii Somaliyeed dowlado iyo shirkado qalaad.
Waxaa soomaaliyi wada ogsoon tahay in Dowladahan qalaad iyo shirakadahooduba aay muddo dheer ugaarsanayeen cid kasta ee mas’uuliyad qaran qabata si aay mar un shaabad tuugeysi ah oo ay ku xalaalaystaan qaybo ka mid ah dhulbadeedka Soomaaliyeed u helaan. Waxaa sir la wada ogsoon yahay ah in aay jiraan Rag xilal waaweyn kasoo qabtay Muddadii KMG oo si toos ah ugu adeegayay Norway, Kenya iyo France si ay shaabad boob-ku- xalaalaysi ah ee dhulbadeedka Soomaaliyeed u helaan.
Waxaa hubaal ah, haddaan soomaaliyi maanta hurdada degdeg uga kicin, in shuftadaasi aay maal fara badan qeybindoonaan (LAALUUSH) siidii aay uguhirgasho boobka lala damacsanyahay dhulbadeedka Soomaaliyeed oo la rabo in lagu soo koobo 12nm.
Ma jiraan haba yaraatee wax an ahayn danaha shuftada oo Madaxweyne Xasan ku khasbay in uu la soo boodo in badda soomaaliyeed ku koobantahay 12nm oo kali ah.
Maadaama arrintan aay soo noqnoqoneysay laga soo billaabo 2009 oo walina ay dokumentigii iyo qaylodhaantii laga helayo websiteyada, waxaan ku soo koobayaa qoraalkan in si mutawaadic-nimo leh aan uga codsado :-
Xubnaha barlamaanka in aay mariyaan arrintan, marinkii aay mariyeen barlamaankii hore, loogana digo cid kasta in dib lo soo qaado arrinta dhulbadeedka soomaaliyeed ilaa Soomaaliya aay si buuxda u dagto oo taladu gacanteeda ku soo noqoto.
Barlamaanka Soomaaliyeedna waa in uusan aalad u noqon kala dhantaalka dhulka somaliyeed.
Barlamaanku waa in u hor istaago dhaxalwareejinta dhulbadeedka somaliyeed.
Shacbiga Soomaaliyeed oo idili waa in aay u istaagaan ilaalinta midnimada iyo ka hortagga boobka lagu hayo dhulbadeedka Soomaaliyeed iyo kheyraadka ku jira..
Waxgaradka, Culamaa’udiinka iyo Aqoonyahannada Soomaaliyeed waa in ay ka gudbaan caadifadaha iyo khilaafaadka yaryar oo arrintan u arkaan, sida aay mudan tahay, oo ah QADYAD QARAN si midaysanna aay ugu hawlgalaan.
(Waxaan xasuusinaya somalida oo idil hadal u yiri Menahem begin oo horjooge ahaa markii falastiniyiinta si argagixnimo ah looga barakinayay dalkoodii , markii dambana laftigiisii ra’iisulwasaare ka noqda Israel. Ninkaasii markii la waydiiyey sidii wax u dhaceen waxuu yiri:- (Dad dhul lahayn, ayaa helay dhul an dad lahayn).
Waxay hadda u egtahay sidaas oo kale in dhul an dad lahayn, ay dad dhul iyo khayraadka ku jiraa doonayaa ay qaadanayaan.
Prof. Cabdi Faarax Xasan (suubiye22@hotmail.com)
Guddoomiyihii Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed.
Qoraalkii hore ee Prof. Cabdi Faarax Xasan, Guddomiyihii Jamacadda Ummada Soomaaliyeed: Dadka Soomaliyeed waa in ay wada jir uga hortagaan heshiiska Lagu Bililaqaysanayo dalka Soomaaliyeed http://somalitalk.com/2009/may/13/badda16.html
Faafin: SomaliTalk.com | May 16, 2013
Badda Soomaaliya Beec ma aha (Somalia is NOT for Sale): Xildhibaan Dalxa
Norway oo Waftigii Baarlamaanka ee Booqday Oslo usoo dhiibtey Dukumiinti lagu Burburinayo Sharciga Badda Soomaaliya ee Law No. 37.
DHAGEYSO:-Waxgaradka Falanqeeyay Xaalada Kismaayo.
Qaar kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxa laga filan karo Doorasho shalay ka dhacday Magaalada Kismaayo oo Axmed Madoobe Hogaan loogu doortay maamulka jubbaland.
Falanqeynta ayaa waxaa wadaagaya Salaad Faarax Cabdulle,Xasan Nuur Sabdoow iyo Garaad Maxamuud Maxamed.
Waxgaradka aya asku raacay in Axmed Madoobe iyo Kenya ay yihiin Camiiliin u adeega reer galbeedka kuwaasi oo iyago aanan rabin in dalka Soomaaliya laga hirgaliyo dowlad islaamka dadka ku xukunta.
Shalay ayay ahayd markii laba doorasho oo ka dhacday Kismaayo lagu kala doortay Barre Aadan Shire iyo Axmed Madoobe.
HALKAN KA DHAGEYSO FALANQEYNTA WAXGARADKA.